सरकारले सहकारीको ब्याजदर सिमा तोक्यो, कति प्रतिशत लिन पाउछन् ? « Lokpath
१७ श्रावण २०७६, शुक्रबार १६:३२
सरकारले सहकारीको ब्याजदर सिमा तोक्यो, कति प्रतिशत लिन पाउछन् ?
प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०७६, शुक्रबार १६:३२
काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको पनि ब्याजदरको सीमा तोकेको छ ।
सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी ब्याज असुली रहेका बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तरगतको सहकारी विभागले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन नपाउने गरी सहकारी संस्थाहरुको पनि ब्याजदरको सीमा तोकि दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ब्याजदरलाई मुख्य आधार बनाएर सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिस अनुसार सहकारी संस्थाहरुको पनि कर्जाको व्याजदर १६ प्रतिशत भन्दा बढि लिन नपाउने निर्णय गरिएको विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले साउन १९ गते आईतबारबाट लागू हुने सो निर्णयमा बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा घटी रहने व्यवस्था पनि गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको व्याजदर निर्धारणका लागि रजिष्ट्रार पाण्डको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रको सुशासनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने कार्यलाई पनि अघि बढाइएको जनाएको छ । विभागका रजिष्ट्रार पाण्डेले सहकारी क्षेत्रको सुशासनका लागि पनि कार्यविधि र निर्देशिका आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
साना व्यवसायीका लागि सिद्धार्थ बैंकको सरल कर्जा योजना
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले नयाँ कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले मझौला
एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहकलाई रेष्टुरेण्टहरूमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । एन आइ सी एशिया बैंक र द्वारिकाज होटेल प्रा।लि बत्तिसपुतली काठमाडौंबिच
एन आई सी एशिया लघुवित्तको दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । एन आइ सी एशिया बैंकको सहायक कम्पनी एन आइ सी एशिया
लक्ष्मी बैंकको १२० औँ शाखा काकडभिट्टामा
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंक लिमिटेड नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो